လူတွေ ဘာကြောင့် အလိုက်သင့် မနေတတ်ရတာလဲ – Gentleman Magazine
လူတှေ ဘာကွောငျ့ အလိုကျသငျ့ မနတေတျရတာလဲ
တစ်ချိန်ချိန်မှာတော့ အဲဒိမေးခွန်းကို မေးမိမှာပါ။ တစ်ခါတစ်လေမှာ တခြားသူနှစ်ယောက်ကြား ပြသနာလေးတွေ ဖြစ်တာကို ကြည့်ပြီး မေးတတ်ပြီး တစ်ခါတစ်လေတော လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက် သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ပြသနာ ဖြစ်ပြီးရင် ကိုယ့်ဘာသာပြန်မေးမိတတ်ပါတယ်။
အလွယ်ပြန်ဖြေရရင်တော့ အလိုက်သင့် နေလို့ မရလို့ပါ။ အထွန့်တက်တယ်ဆိုတာ လူ့သဘာဝ ဖြစ်ပြီး ခေတ်သစ်လုပ်ငန်းခွင်ဆိုတာကလဲ အထွန့်တက်စရာ အမြင်ကွဲစရာ ကိစ္စတွေ အများကြီးရှိတဲ့ နေရာပါ။ အဲဒိကြားထဲကနေ အလုပ်တွေ ပြီးမြောက်နေတာကိုပဲ အံဩရပါမယ်။
အလိုက်သင့်နေတတ်တာဟာ ကောင်းမွန်ပြီး ဆက်ဆံရေးပြေပြစ်စေတယ်လို့ ကျွန်တော်တို့အားလုံး လက်ခံယုံကြည်ထားပေမယ့် အလိုက်သင့် မနေသင့်တဲ့ အခါတွေ ရှိပါသေးတယ်။ ကွဲပြားတဲ့ အမြင်တွေကို လေ့လာပြီး အလုပ်အကိုင် ပိုကောင်းအောင် လုပ်ရတဲ့ အခါတွေ ရှိပါသေးတယ်။ ဘယ်လို အဆင်ပြေပြေ အလိုက်သင့် မနေရဘူးလဲ ဆိုတာကို သိဖို့က လုပ်ငန်းခွင်မှာ အဆင်ပြေဖို့ အရမ်းအရေးကြီးပါတယ်။
လူနှစ်ယောက်ရှိရင် တစ်ယောက်တစ်မျိုးမြင်ကြတတ်ပါတယ်။ လူဆယ်ယောက်လောက်ပါတဲ့ ကုမ္ပဏီ ဘုတ်အဖွဲ့တွေမှာဆို အစည်းအဝေးတွေမှာ နောက်ဆုံး ဆုံးဖြတ်ချက် ချဖို့ အမြင်တွေ အရမ်းကွဲနေမှာပါ။
အဲဒိလို အခြေအနေမျိုးဆိုရင် လုပ်စရာ နှစ်နည်းရှိပါတယ်။ ပထမနည်းကတော့ အားလုံးရဲ့ အမြင်တွေနဲ့ ကွဲပြားမှု အရမ်းမရှိတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကို Boss က ချလိုက်ခြင်းပါ။ အဲဒါက အကောင်းဆုံး နည်းလမ်းတော့ မဟုတ်ပါဘူး။
ပိုပြီးကောင်းမွန်တဲ့ ဒုတိယ နည်းလမ်းကတော့ အရင်ဆုံး ဘယ်သူ့အမြင်ကိုမှ ဖိနှိပ်ပစ်လိုက်ခြင်း မရှိစေရပဲ အစည်းအဝေးမှာ ပါဝင်သူအားလုံး အဆင်ပြေပြေ ဝင်ရောက် ဆွေးနွေး ငြင်းခုံလို့ရတဲ့ အခြေအနေတစ်ခုကို Boss က တည်ဆောက်လိုက်ခြင်းပါ။
၁. တရားမျှတမှု ရှိပါ
ဆုံးဖြတ်ရမယ့် ကိစ္စကိုပဲ အလေးထားပြီး မဆိုင်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေ ဝင်မလာပါစေနဲ့။ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာတွေ မပါပါစေနဲ့။ တိုက်ခိုက်ဝေဖန်ရမှာက ပြသနာကို ဖြစ်ပြီး လူပုဂ္ဂိုလ်ကို တိုက်ခိုက်ဝေဖန်စရာ မလိုပါဘူး။ တခြားသူတွေကိုလဲ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ပါမလာအောင် ထိန်းညှိပေးပါ။
၂. ပွင့်လင်းမြင်သာမှုနဲ့ ရိုးဖြောင့်မှုတို့ ရှိပါစေ
အဲဒါက သော့ချက်ပါပဲ။ သင့်ရဲ့ အမြင်မှာ တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်မှုတွေ၊ အိတ်ထဲ ထည့်လိုမှုတွေ၊ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ရလိုမှုတွေ မပါသင့်ပါဘူး။ အားလုံးကို လွတ်လပ်စွာ ဝေဖန်ခွင့် ပေးထားရပါမယ်။ ဒီ အစည်းအဝေးလုပ်ရတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က ကုမ္ပဏီအတွက်ဆိုတာ မှတ်ထားပါ။ အားလုံးကိုလဲ သိပါစေ။
၃. ဆုံးဖြတ်ချက် ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ချပါ
အစည်းအဝေးဟာ နောက်ဆုံးမှာ ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခု ထွက်လာမှာပါ။ အားလုံးသဘောတူစရာ မလိုပါဘူး။ သင့်တာဝန်က စားပွဲပေါ်မှာ ကိစ္စအားလုံး တော်တော်ရှင်းပြီး လူတော်တော်များများ ထောက်ခံလာတဲ့အထိ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို တွန်းပို့ပေးရမှာပါ။
၄. ဆုံးဖြတ်ချက်ကို အပြည့်အဝ ပံ့ပိုးပေးပါ
အစည်းအဝေးပြီးရင် ဆုံးဖြတ်ချက်ကို မကျေနပ်သူတွေက အဲဒီဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်း လိုက်ပါဆောင်ရွက်ဖို့ ဝန်လေးနေတတ်ပြီး အလုပ်မှာ လေးကန်ဖင့်နွဲ့နေတတ်ပါတယ်။ သဘောမတူသူတွေက သူတို့ရဲ့ အမြင်ကို ဘေးချိတ်ထားပြီး ချမှတ်လိုက်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်း ကုမ္ပဏီအတွက် အစွမ်းရှိသ၍ ဆောင်ရွက်ပေးရမှာပါ။
ဒီအချက်လေးချက်ဟာ လုံးဝပြီးပြည့်စုံနေတာ မဟုတ်ပေမယ့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချရမှာ တော်တော် အဆင်ပြေသွားမှာပါ။ သင် အဲဒိအချက်တွေပေါ်မှာ ယုံကြည်မှုရှိရမှာဖြစ်ပြီး လုံးဝ လိုက်နာရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
တဈခြိနျခြိနျမှာတော့ အဲဒိမေးခှနျးကို မေးမိမှာပါ။ တဈခါတဈလမှော တခွားသူနှဈယောကျကွား ပွသနာလေးတှေ ဖွဈတာကို ကွညျ့ပွီး မေးတတျပွီး တဈခါတဈလတေော လုပျဖျောကိုငျဘကျ သူငယျခငျြးတှနေဲ့ ပွသနာ ဖွဈပွီးရငျ ကိုယျ့ဘာသာပွနျမေးမိတတျပါတယျ။
အလှယျပွနျဖွရေရငျတော့ အလိုကျသငျ့ နလေို့ မရလို့ပါ။ အထှနျ့တကျတယျဆိုတာ လူ့သဘာဝ ဖွဈပွီး ခတျေသဈလုပျငနျးခှငျဆိုတာကလဲ အထှနျ့တကျစရာ အမွငျကှဲစရာ ကိစ်စတှေ အမြားကွီးရှိတဲ့ နရောပါ။ အဲဒိကွားထဲကနေ အလုပျတှေ ပွီးမွောကျနတောကိုပဲ အံဩရပါမယျ။
အလိုကျသငျ့နတေတျတာဟာ ကောငျးမှနျပွီး ဆကျဆံရေးပွပွေဈစတေယျလို့ ကြှနျတျောတို့အားလုံး လကျခံယုံကွညျထားပမေယျ့ အလိုကျသငျ့ မနသေငျ့တဲ့ အခါတှေ ရှိပါသေးတယျ။ ကှဲပွားတဲ့ အမွငျတှကေို လလေ့ာပွီး အလုပျအကိုငျ ပိုကောငျးအောငျ လုပျရတဲ့ အခါတှေ ရှိပါသေးတယျ။ ဘယျလို အဆငျပွပွေေ အလိုကျသငျ့ မနရေဘူးလဲ ဆိုတာကို သိဖို့က လုပျငနျးခှငျမှာ အဆငျပွဖေို့ အရမျးအရေးကွီးပါတယျ။
လူနှဈယောကျရှိရငျ တဈယောကျတဈမြိုးမွငျကွတတျပါတယျ။ လူဆယျယောကျလောကျပါတဲ့ ကုမ်ပဏီ ဘုတျအဖှဲ့တှမှောဆို အစညျးအဝေးတှမှော နောကျဆုံး ဆုံးဖွတျခကျြ ခဖြို့ အမွငျတှေ အရမျးကှဲနမှောပါ။
အဲဒိလို အခွအေနမြေိုးဆိုရငျ လုပျစရာ နှဈနညျးရှိပါတယျ။ ပထမနညျးကတော့ အားလုံးရဲ့ အမွငျတှနေဲ့ ကှဲပွားမှု အရမျးမရှိတဲ့ ဆုံးဖွတျခကျြတဈခုကို Boss က ခလြိုကျခွငျးပါ။ အဲဒါက အကောငျးဆုံး နညျးလမျးတော့ မဟုတျပါဘူး။
ပိုပွီးကောငျးမှနျတဲ့ ဒုတိယ နညျးလမျးကတော့ အရငျဆုံး ဘယျသူ့အမွငျကိုမှ ဖိနှိပျပဈလိုကျခွငျး မရှိစရေပဲ အစညျးအဝေးမှာ ပါဝငျသူအားလုံး အဆငျပွပွေေ ဝငျရောကျ ဆှေးနှေး ငွငျးခုံလို့ရတဲ့ အခွအေနတေဈခုကို Boss က တညျဆောကျလိုကျခွငျးပါ။ အဲဒိလို တညျဆောကျနိုငျဖို့အတှကျ Boss အနနေဲ့ လိုကျနာစရာ လေးခကျြရှိပါတယျ။
၁. တရားမြှတမှု ရှိပါ
ဆုံးဖွတျရမယျ့ ကိစ်စကိုပဲ အလေးထားပွီး မဆိုငျတဲ့ အကွောငျးအရာတှေ ဝငျမလာပါစနေဲ့။ ကိုယျရေးကိုယျတာတှေ မပါပါစနေဲ့။ တိုကျခိုကျဝဖေနျရမှာက ပွသနာကို ဖွဈပွီး လူပုဂ်ဂိုလျကို တိုကျခိုကျဝဖေနျစရာ မလိုပါဘူး။ တခွားသူတှကေိုလဲ ကိုယျရေးကိုယျတာ ပါမလာအောငျ ထိနျးညှိပေးပါ။
၂. ပှငျ့လငျးမွငျသာမှုနဲ့ ရိုးဖွောငျ့မှုတို့ ရှိပါစေ
အဲဒါက သော့ခကျြပါပဲ။ သငျ့ရဲ့ အမွငျမှာ တဈကိုယျကောငျးဆနျမှုတှေ၊ အိတျထဲ ထညျ့လိုမှုတှေ၊ ကိုယျရေးကိုယျတာ ရလိုမှုတှေ မပါသငျ့ပါဘူး။ အားလုံးကို လှတျလပျစှာ ဝဖေနျခှငျ့ ပေးထားရပါမယျ။ ဒီ အစညျးအဝေးလုပျရတဲ့ ရညျရှယျခကျြက ကုမ်ပဏီအတှကျဆိုတာ မှတျထားပါ။ အားလုံးကိုလဲ သိပါစေ။
၃. ဆုံးဖွတျခကျြ ရှငျးရှငျးလငျးလငျး ခပြါ
အစညျးအဝေးဟာ နောကျဆုံးမှာ ဆုံးဖွတျခကျြတဈခု ထှကျလာမှာပါ။ အားလုံးသဘောတူစရာ မလိုပါဘူး။ သငျ့တာဝနျက စားပှဲပျေါမှာ ကိစ်စအားလုံး တျောတျောရှငျးပွီး လူတျောတျောမြားမြား ထောကျခံလာတဲ့အထိ ဆုံးဖွတျခကျြကို တှနျးပို့ပေးရမှာပါ။
၄. ဆုံးဖွတျခကျြကို အပွညျ့အဝ ပံ့ပိုးပေးပါ
အစညျးအဝေးပွီးရငျ ဆုံးဖွတျခကျြကို မကနြေပျသူတှကေ အဲဒီဆုံးဖွတျခကျြအတိုငျး လိုကျပါဆောငျရှကျဖို့ ဝနျလေးနတေတျပွီး အလုပျမှာ လေးကနျဖငျ့နှဲ့နတေတျပါတယျ။ သဘောမတူသူတှကေ သူတို့ရဲ့ အမွငျကို ဘေးခြိတျထားပွီး ခမြှတျလိုကျတဲ့ ဆုံးဖွတျခကျြအတိုငျး ကုမ်ပဏီအတှကျ အစှမျးရှိသ၍ ဆောငျရှကျပေးရမှာပါ။
ဒီအခကျြလေးခကျြဟာ လုံးဝပွီးပွညျ့စုံနတော မဟုတျပမေယျ့ ဆုံးဖွတျခကျြခရြမှာ တျောတျော အဆငျပွသှေားမှာပါ။ သငျ အဲဒိအခကျြတှပေျေါမှာ ယုံကွညျမှုရှိရမှာဖွဈပွီး လုံးဝ လိုကျနာရမှာ ဖွဈပါတယျ။
Previous: သူဌေးဖြစ်ဖို့ နေ့စဉ်အလေ့အကျင့်များ
Next: လူချစ်လူခင်များစေနိုင်သည့် အမူအကျင့်များ